Hoteelka Imperial Pacific Resort Hotel ・ Saipan wuxuu hawl galayaa 6 Luulyo, 2017
Bogga ugu weyn » Maqaallada Wararkii Ugu Dambeeyay » Warshadaha Warshadaha » Hoteelka Imperial Pacific Resort Hotel ・ Saipan wuxuu hawl galayaa 6 Luulyo, 2017
Jebinta Wararka Caalamka • Safarka Ganacsiga • Warshadaha Warshadaha • Wararka Micronesia • News • Dalxiiska • Cusbooneysiinta Socdaalka Safarka
Imperial Pacific International Holdings Limited waxay ku faraxsan tahay inay ku dhawaaqdo inaan ka guureyno xarunteenna tababarka ee ku-meel-gaarka ah - Ugu Fiican Sunshine Live oo aan u guureyno Imperial Pacific Resort Hotel ・ Saipan, casino heer caalami ah oo ku yaal Garapan Khamiista, Julaay 6, 2017. Kani waa cajiib cusub casino ayaa lagu wadaa inuu dib u qeexo raaxada iyada oo qayb ka ah horumarka xiisaha leh ee Saipan xarun caalami ah oo firaaqo iyo madadaalo leh.
Albaabka weyn ee laga soo galo dhismaha naadiga, albaab weyn oo leh 5 shaashadood oo waaweyn oo loo yaqaan 'LED' iyo wadiiqooyin raaxo leh ayaa horseed u ah martida inay toos u galaan goobta ciyaarta iyo madadaalada. Kicin iyo weli qurux badan, aagga ciyaarta wuxuu ka kooban yahay in ka badan 70 miisas ciyaaro iyo in ka badan 190 mashiinno elektiroonig ah oo lagu ciyaaro.
Fikradda qaab dhismeedka bilicsanaanta iyo hal-abuurka leh ee hudheelkan dalxiiska ayaa ah isku-dhafka ugu fiican ee adduun-biyoodka neefta qaadanaya iyo nuxurka qaab-dhismeedka reer galbeedka. Mucjisada quruxda badan waxaa abuuray shirkad hoggaamineysa nashqad-dhismeedka - Steelman Partner, oo ku takhasusay abuurista heer caalami oo heer caalami ah iyo hudheel. Mustaqbalka, dhismaha hudheelku wuxuu bixin doonaa 329 hudheello hudheello hudheello leh iyo 15 deluxe villas, maqaaxiyo badan oo ay madax u yihiin cunto kariyeyaasha caanka ah ee Michelin Star iyo kuwa ugu horreeya heshiisyada iyo madaddaalada.
Waxay ku taal bartamaha Waqooyiga Mariana Islands, Imperial Pacific Resort Hotel ・ Saipan waa mid ka mid ah mashruucii ugu horreeyay ee heer caalami ah ee raaxada & Hoteelka ee Imperial Pacific International (CNMI), LLC Limited.
Saipan, luul qaali ah oo ku taal Galbeedka Badweynta Baasifigga, waxay leedahay deegaan juqraafiyeed dabiici ah oo dabiici ah iyo ilo faro badan oo dalxiis. Waxaa ku hareereysan maraakiibta firfircoon ee dhirta iyo roobka kuleylaha, jannadan kuleylka ah waxay bixisaa xeebo ciid cadaan qurux badan leh oo ka hoosaysa muuqaal muuqaal-qumman Saipan waa hubaal meel kuleyl ah oo ku habboon xilliyada firaaqada iyo nasashada.
Sida Mr. Kwong Yiu Ling, Madaxa Fulinta ee Imperial Pacific International (CNMI) uu faallo ka bixiyey, “Imperial Pacific waxay u heellan tahay horumarinta maal-gashiga heer caalami ah iyo mashaariicda madadaalada ee ugu dambeeya In Saipan. Aad ayaan ugu faraxsanahay inaan u wareejino Imperial Pacific Resort Hotel ・ Saipan. Waa tallaabaddeenii ugu horreysay waxaana runtii gacan ka geysan doonnaa inaan bilowno xilli cusub oo raaxo ah oo ku yaal Saipan. Waxaan si aad ah ugu shaqeyn doonnaa horumarka waara iyo Saipan, wuxuu noqon doonaa mid ka mid ah meelaha safarka loogu jecel yahay adduunka.